अर्कैसंग विवाह गर्न जाँदै थिए प्रेमी, बेहुली बनेर जब मण्डपमै प्रेमिका पुगिन् : त्यसपछि भयो यस्तो तमासा – Sandesh Press
December 22, 2020 199
Prevछोरी जन्माइन्, तर छोरीलाई काखमा राख्न नपाई संसार बाटै विदा भइन् !
Nextपोखराको लागि उडेको विमानमा घट्यो विश्वासै गर्न नसकिने घटना, पाइलट,यात्रु सबैको होश उड्यो !
पक्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै चकित
भोलिदेखि गाडि चल्न नदिइने ! कुन कुन ठाँउ हेर्नुहोस
भागरथीकी आमा भन्छिन्, दिनेश घाम छँदै घर आएको थियो, उसले कसरी मा’र्‍यो ?
यहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ (2857)